Ngwá Agha Nzuzo maka Ọka Mma na Ọrịre | Martech Zone
Na Mọnde, Nọmba 5, 2013 Kelsey Cox
Laa azụ n'ụbọchị ahụ, ịghọta ihe ndị ahịa chọrọ bụ n'ụzọ dị ukwuu egwuregwu egwuregwu, mana yana ngwa ọrụ taa nchịkọta na akụrụngwa ahịa, ịkọ omume ndị ahịa dị mfe karị.
95% nke ụlọ ọrụ na-eji amụma nchịkọta kọọrọ ka mma na-eduga, arụmọrụ ka ukwuu, yana / ma ọ bụ karịa ahịa emechiri emechi. Ọzọkwa, 59% nke ndị CMO chere na mmejuputa azịza ngwa ahịa akpaaka ga-eme ka usoro azụmaahịa ha 'arụmọrụ na arụmọrụ ha dị elu. Akpaaka na-enyere aka n'ịzụlite atụmanya n'ime ndu, yabụ na ị gaghị egbusi ihe onwunwe na ndị ahịa na-adịghị njikere ịzụta, kama na-ahọrọ ndị na-eche.
Companieslọ ọrụ ndị na-echekwa ihe na-ekwe ka ahịa na-akpaghị aka nyochaa omume ndị ahịa ka ndị ahịa wee nwee ike itinye oge ha n'ọrụ ndị ka mkpa. Ihe omuma a, site na Ngwa Lattice, visualizes data gburugburu nchịkọta na akpaaka, na otu esi ewepu ngwa agha nzuzo ndị a iji wuo atụmatụ azụmaahịa ka mma.
Tags: Analyticsinfographicmarketingakụrụngwa ahịanchịkọta amụma